Emefa.myserver.org။ 26 April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-12-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"2010 Provisional Census Results Out" (2010). Ghana Government. Retrieved on 2011-02-07.
Ghana။ International Monetary Fund။ 2011-04-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။